साहित्य Archives - Ilam Aawaj
जब खुल्छ्न आँखा मेरा इलामलाई नै देख्छु सपनिमा पनि मत इलामलाई नै भेट्छु हरियो कार्पेटसगै हजुर पर्छु सधैं शरण जन्म मेरो इलाम हजुर इलाम नै होस मरण लुकामारी खेल्दै हुर्के त्यो बादलुसग सबैभन्दा प्रिय लाग्ने त्यही हरियो रङ्ग कति चिसो कति मीठो इलामको पानी नेपालले नै मन पराउछ कुहिरोकी रानी &n...
समय उस्तै नरहला र परिस्थिति, उस्तै नरहला हावा, पानी आकाश अनि धर्ती आँधी तुफान सरि उडाएर लग्ने भावनाहरु भविष्य र वर्तमानमा रुम्मल्लिएका उथलपुथल चाहनाहरु एकतर्फी मायाका ब्याजहरु आठ रेक्टर भूकम्पका भग्नावाशेषझैँ यादहरु उस्तै नरहला दिनहरु उस्तै नरहला रातहरु l ...
खोपमा खटेकी एउटा स्वास्थ्यकर्मीको कथा
सिजन आज निकै हतारमा देखिन्छिन् । लाग्छ आलस्यता र जाँगरमरुवा पनले उनलाई विर्सिएको छ । हतारको काम लतरपतर भन्छन् नि, उनको काम पनि त्यस्तै पो छ। यतिविधि जाँगरको कारण साख ठूलो चाहिँ छैन – सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने घोषणा जो गरेको छ । काखको बच्चो स्याहार्नेदेखि सबैलाई तातो खाना दिनु उनको विहानको रुटिन नै हो। त्यस...
रहेनन् झापाका साहित्यकार फाइवाली
काँकडभिट्टा । किरात भाषा र साहित्यका ज्ञाता नवल फाइवालीको मंगलबार निधन भएको छ । उच्च रक्तचापका बिरामी ७८ वर्षीय उनको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । मोरङको सिंहदेवी गाविसमा जन्मिएर झापालाई कर्म क्षेत्र बनाएका फाइवाली चार दशकदेखि साहित्यिक सिर्जनामा अनवरत सक्रिय थिए । खासगरी किरात भाषा र...
विषय प्रवेश पूर्वको रातो तारा इश्वर पोखरेलद्धारा लिखित सस्मरणात्मक निबन्ध कृति हो । शहीद रत्नकुमार बान्तवा र इश्वर पोखरेल उच्च शिक्षा अध्ययनकालका सहयात्री, कम्युनिष्ट विचार निर्माणका लाल योद्धा र साहित्यिक उन्नयनका कर्मी मौरी हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु दुवैजना नेकपा माले पार्टीको सस्थापक केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । न...
“फेरि कहाँ डुलेर आइस्?” मैले झर्किदेै सोधेँ । “मलाई नै नसोधी तँ सुटुक्क डुलेर आउने‘‘‘‘?” “मलाई डुल्न नदिइ तँलाइ सुखै छैन ।” उसले भन्यो । “आखिर तँलाई बाँच्न सिकाउने म नै हो क्यारे ।” गिज्याइएको पारामा दिइएको यो जवाफ मैले सहनै सकिन र भने “तँलाईबनाएको मैले हो । तर‘ तर तँ मलाई नै तेरो अधिनमा पार्न खोज्छस्?” “मैले तँलाइ ...
जिन्दगी साँच्चै नियतिको दास भएको छ हेर्दाहेर्दै आफैं जिउँदो लास भएको छ बाँचौ यहाँ कति दिन बनेर परजीवी कसैको निगाह मलाई प्यास भएको छ सुनाएको थिएँ कुनैदिन दुखको कहानी आज त्यही कहानी उपहास भएको छ बनेको छ जिन्दगी यन्त्र जडित रोबर्ट झैँ खाली दिमाग शैतानको बास भएको छ न वर्तमान न भविष्य म फकि...
समाज रुपान्तरणको योजना रहेछ डा. दुलालको घर फर्क उपन्यास
म कुनै समालोचक नभइ केवल एउटा पाठक मात्र हो । यो लक डाउनको समयमा मैले वीपी को आत्म बृतान्त, जेल जर्नल, विवेक शाहको मैले देखेको दरबार, खप्तड स्वामीको म र मेरो कर्तब्य, दिल्ली अनि दरबार भन्ने किताब पढेँ । त्यस्तै डा. देवी क्षेत्री दुलालका कृतिहरु इलामको चिया पर्यटन र काले दमाइ नाटक पढेर समयको उपयोग गरिरहेको थिएँ ।उहाँका...
विमल गाैतमले ल्याए ‘मायाको दूरी’(भिडियोसहित)
गायक विमल गौतमले आफ्नै शब्द, संगीत र स्वरमा ‘मायाको दुरी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन् ।उनको आफ्नै युट्युब च्यानलमा सार्बजनिक गरेको लिरिकल भर्सनको गीतमा मोहित मुनालले एरेन्ज गरेका छन् भने सागर पाण्डेको रेकर्ड र किसन श्रेष्ठको मिक्सिङ रहेको छ । गीतको लिरिकल भिडियोमा अजय एनजी ले तयार पारेका हुन् । यसअघि उनले 'रुपको ...
इलामे सङ्गीत साधक दियालीको जीवन: कष्टबाट शुरु, साधनाबाट मक्ख
इलाम।‘जातीय भेद्भाव कस्तो हुन्छ’ भनेर जान्न मन लागे इलामका सङ्गीत साधक राम दियालीलाई सोधे हुन्छ । दलित समुदायमै जन्मेका कारण कुनै बेला कस्ता सकस भोग्नु पर्यो दियालीलाई मात्र थाहा छ । कुरा २००६ सालको हो । अनेक विभेद्पूर्ण व्यवहार थिए त्यसबेला । समाजमा उच्च र निचको बहस चल्थ्यो । विभेद एक ठाउँमा केन्द्रित थिएन, जताजतै...